John Kerry: Waxaa loo baahanyahay in la xoojiyo la dagaalka argagixisada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
John Kerry: Waxaa loo baahanyahay in la xoojiyo la dagaalka argagixisada
4th May 2015 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Xog-hayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, John Kerry oo ku sugan dalka Kenya ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo dagaalka lagula jiro waxa loogu yeero Argagixida.
Wuxuu tilmaamay in dagaalka argagxisada uu yahay mid caalami ah, islamarkaana laga guuleysan doono.
Kerry ayaa maanta booqday safaradda Mareykanka ee Nairobi ee la weeraray 1998-kii oo ay ku dhinteen 223 qof oo ay ku jireen 10 u dhashay Mareykanka, isagoo la hadlay qaar ka tirsan dadkii ka badbaaday weerarkaas.
Mr Kerry ayaa ubaxyo dhigay halka ay ku qoran yihiin magacyada dadkii weerarkaas ku dhintay, si uu ugu muujiyo wadajir dhibanayaashii ku waxyeeloobay weerarkaas, waxaana uu xusay in Argagixisadu ay mar walba fashilmayaan.
Xog-hayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo shalay garay magaalada Nairobi ayaa kulamo la leh madaxda dalka Kenya, wuxuuna hordhac u yahay booqasho la filayo bisha July inuu Kenya ku yimaado madaxweynaha Mareykanka Brack Obama.
John Kerry ayaa la faliyaa inuu usii gudbo dalka Jabuuti, halkaasoo uu kula kulmi doono madaxda dalkaas.